Ahoana ny fikajiana ny haben'ny sary nomerika | Famoronana an-tserasera
Ahoana ny fikajiana ny haben'ny sary nomerika
Lola curiel | 18/06/2021 09:00 | Graphic Design, General, Cheats
Ny fanaovana kajy ny haben'ny sary nomerika dia tsy manahirana. Na izany aza, misy teny maro mifandraika miaraka amin'ny sary niomerika ary indraindray mora ny manakorontana ny iray. Alohan'ny hahalalanao ny fomba fanaovana kajy ny habe dia ilaina ny mazava momba ny hevitra sasany, toy ny hoe sary nomerika na ilay fahasamihafana eo amin'ny habe nomerika na ny lanjany ary ny haben'ny vatana. Amin'ity lahatsoratra ity hamarana ireo fisalasalana rehetra ireo isika miampy hampianarinay anao ny kajy ny haben'ny sary nomerika Aza dia taraina!
1 Inona ny sary nomerika
2 Hevitra izay tokony hazava tsara rehefa miresaka sary nomerika
2.1 Halalin'ny loko
2.2 Fomba fandokoana
2.3 Haben'ny sary nomerika
3 Ahoana ny fikajiana ny haben'ny sary nomerika
Inona ny sary nomerika
Sary nomerika no fanehoana roa refy amin'ny sary amin'ny alàlan'ny sombintsombiny. Ny kely dia ny singa kely indrindra amin'ny fampahalalana, izay mazàna amin'ny iray sy ny zerô. Amin'ny teny tsotra, sary nomerika dia be dia be ireo ary zerô (information) izay rehefa atambatra dia mamorona sary.
Miantso an'ity karazana sary ity izahay, noforonin'ny kaody mimari-droa bitmaps. Antsoina hoe izany izy ireo, satria raha ny tena izy dia ny vokatry ny fidirana isa na piksel marobe. Raha ny marina, raha mankany amin'ny programa fanovana ianao, toy ny Photoshop, ary manitatra sary ampy, dia ho hainao ny manavaka ireo piksela ireo. Ny piksely tsirairay dia vita amin'ny sombintsombiny.
Hevitra izay tokony hazava tsara rehefa miresaka sary nomerika
La ny halalin'ny loko izy dia manondro ny isan'ny sombin-javatra ilaina mametaka ary mitahiry ny vaovao momba ny loko isaky ny pixel. Ohatra, raha 1 bitika dia loko 2 ihany no azo atao encode; fa raha 24-bit izy, 16,7 tapitrisa loko isan-karazany no azo tehirizina.
Fomba fandokoana dia ny habetsaky ny antontan-kevitra momba ny loko voalaza fa azo tehirizina. Ohatra, amin'ny maody loko RGB, 16 tapitrisa ny totalin'ny loko azo tehirizina (halalin'ny loko 24-bit), raha toa ka miasa amin'ny maody monochrome isika dia loko roa ihany no hotehirizina (halalin'ny loko 1-bit).
Haben'ny sary nomerika
Ny haben'ny sary nomerika dia faritana ho vokatry ny lny isan'ny pixel an'ity sary ity amin'ny sakany amin'ny isan'ny pixel avo. Ny haben'ny sary nomerika, fantatra koa amin'ny lanjan'ny sary, dia matetika refesina amin'ny bytes, MB, na KB ary tsy afangaro amin'ny habe ara-batana (izay matetika refesina amin'ny cm). Ny sary mitovy amin'izany dia azo atao pirinty amin'ny habe ara-batana samy hafa, toy ny sary misy lanjany hafa dia azo atao pirinty amin'ny haben'ny vatana ihany. Ny mamaritra ny habe nomerika an'ny sary dia ny kalitaony: ny haben'ny habeny, izany hoe, arakaraky ny pixel ao anatiny no avo kokoa ny kalitaony. Raha manana sary misy pixel vitsivitsy isika dia mihena ny kalitao ary ho hita ireo pikantsary ireo.
Ohatra, raha manonta sary nomerika roa samy hafa amin'ny habe ara-batana mitovy aho, ilay iray manana pixel be indrindra (sary 1) dia toa tsara lavitra noho ilay iray hafa (sary 2).
La ny kalitaon'ny sary nomerika dia fantatra koa amin'ny hoe resolution. Amin'ny lafiny teknika, ny famahana dia ny hakitroky ny teboka, izany hoe ny isan'ny pixel amin'ny 1 inch (dpi).
Lojika, arakaraka ny maha lanjan'ilay sary azy, ny pixel vitsy kokoa no hamolavola azy ary ny piksel vitsy kokoa dia hisy isaky ny santimetatra. Ho ratsy kokoa noho izany ny famahana azy noho ny sary mavesatra kokoa natao pirinty tamin'ny habe ara-batana mitovy.
Rehefa mamaritra ianao hoe vahaolana hanonta ianao, 200 ppi na 300 ppi, ohatra, tsy manova ny haben'ny nomerika amin'ny sary ianao, ny novainao dia ny habeny ara-batana. Raha manonta amin'ny 200 ppi ianao dia hahazo sary lehibe kokoa miaraka amin'ny vahaolana ambany. Raha mampiakatra ny vahaolana ho 300 ianao, dia ho kely ara-batana ny sary, satria angatahinao ny hametrahana piksel marobe kokoa isaky ny santimetatra, ary hahatratrarana an'io, ahena ny haben'ny vatana satria ny haben'ny nomerika dia mijanona ho tsy miova.
Mba hikajiana ny haben'ny sary nomerika amin'ny bytes, mila mihamaro fotsiny isika ny isan'ny pixel total izay manana ny sary (pixel ambony x pixel ny sakany) amin'ny lanjan'ireo pixel tsirairay.
Raha te hahalala ny lanjan'ny piksely tsirairay dia tsy maintsy jerenao ny maody loko. Ohatra, raha sary RGB izy, ny hataontsika dia zarao 24 ny bititra 8, satria ny 1 bit dia mitovy amin'ny 8 bytes. Raha te hahalala ny habe amin'ny KB ianao dia mila mizara ny valiny amin'ny 1024.
Na izany aza, amin'ny solosaina, amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny fananana ilay rakitra, dia ho hitanao ny haben'ny sary tsy misy olana, Ny tena manahirana kokoa dia ny fahalalana ny habeny tokony hanonta sary nomerika mba ho tsara ny famahana, Entiko ianao a fitaka hamonjy ny ainao izany. Afaka miditra ianao kajy habe amin'ny Internet ity hanomanana ny asanao amin'ny fanontana sy hilalaovana azy soa aman-tsara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Ahoana ny fikajiana ny haben'ny sary nomerika
Fitaovana 5 hanaovana peta-drindrina an-tserasera